DUGSIGII SARE EE ALLAYBADAY OO LA DHAMAYSTIRAY | WWW.SOMALILAND.NO
DUGSIGII SARE EE ALLAYBADAY OO LA DHAMAYSTIRAY
Allaybaday(sl.no) 27,may 2008 – Dhismihii ugu horeeyay ee uu yeelanayo dugsiga sare ee Allaybaday ayaa la dhamaystiray, dhismaha dugsigan oo ay dhisday Haayada Caalamiga ah ee Danish Refugee Concel (DRC), Dugsigan ayaa qabyo ahaa in muddo ahba, balse dhamaystiran wakhtigan xaadirka ah.
Hadaba mar aan maanta soo buuqday iskuulkaasi sare ayaa waxa aan kula kulmay iyada oo loo dajinaayo agab waxbarasho oo Dugsigaasi loo keenay, halkaasi oo uu goobjoog ka ahaa Maamulaha Dugsigaasi Mr. Maxamed Adan Daauud, ayaa waxa aan wax ka waydiiyay sidda uu urko Dugsigan cusub? Waxaanu Maamuluhu ii sheegay in ay tahay wax ay muddo ba naawilayeen aadna uu ugu faraxsan yahay, isaga oo yidhi waa wax lagu farxo runtii maanta oo uu dhamaystirmay dhismihii Dugsiga sare ee Allaybaday, waxaa kale oo yidhi muddo 2 sanno ku dhow ayaanu si ku meelgaadh ah ugu soo wadnay waxbarashada iskuulka H/DHEXE ee SH.Axmed Qaalib balse maanta wataasi agabkii waxbarasho naloo keenay ee aad arkayso waxa kale oo uu mahadnaq balaadhan usoo jeediyay Haayada DRC iyo Wasaarada waxbarashada.
Waxaan kale Mahadnaq balaadhan oo la soo koobi karayn u jeedinanaa, aniga ku hadlaa dhamaan bahda waxbarashada Degmada Allaybaday, ururka gacanta ku haya dhamaan dugsiyada Degmada ka ka jira, UHWA, ururkaas oo ay wado sameeyeeyn Qurbo-joogta iyo waxgaradka Degmada u dhashay, waana ka suura galiyay Dugsigan Sarre ee maanta dhamaaday iyo dhamaan 12 Dugsi ee Degmada ka jira hada.
Waxa kale oo aan waydiiyay Maamulaha xiliga ay usoo wareegayaan dugsigan cusub? Waxaanu yidhi imika waxa bilaabanaya xiligii fasaxa dugsiyada markaasi marka lagu soo noqdo 01/08/008 ayaa loo soo wareegi doonaa haddii rabi ogolaado ayuu yidhi.
Waxa kale oo aan maamulaha waydiiyay in ay siddaasi kagala wareegeen Haayadii iyo in ay wali Haayadu gacanta kusii hayn doonto?
Waxaanu ii sheegay Maamule Maxamed in aanay wali haayadii lagala wareegin balse ay haayadu kuwareejin doonto Wasaarada Waxbarashada i xadhigana uu Wasiirku ka jaridoono dhawaan haddii alleh yidhaahdo.
Dugsiga Sarre ee Allaybaday oo ka kooban labo qaybood oo kale ah qayb maalinlaha iyo qayb jeef ah, hada waxaa dhamaaday qeybtii Waxbarashada, Qeybta kale ee jiifka waxaa wada Qurbo joogta Degmada u dhalatay, waxaana la rajaynayaa in ay bilaabaa bisha august ee Sannadkan aanu ku jirno.
Dhinaca Waxbarashada Degmada Allaybaday hore weyn ayay ka samays 4 sanno ee ugu danbeeyay, haday waxay sugasaa in Jaamacadii Gobolka ee laga dhisaaya Magalaada Gabiley ka qayb qaadato.
« Daawo xafladii 18-May 2008 ee Oslo Norway MAGAALADA BURCO OO SI WEYN LOOGA XUSAY 27-KA MAY OO AH MAALINTII GUDAGALKA MUJAAHIDIINTII SNM 1988 »